“BL ဇာတျရုပျအတှကျ လိုအပျနတေဲ့ မငျးသားကို ပရိသတျတှကေိုအကွံပွုခကျြတောငျးလိုကျတဲ့ အဆိုတျော အားတီ” – Cele Gabar
“BL ဇာတျရုပျအတှကျ လိုအပျနတေဲ့ မငျးသားကို ပရိသတျတှကေိုအကွံပွုခကျြတောငျးလိုကျတဲ့ အဆိုတျော အားတီ”
အဆိုတျောအားတီကတော့ R&Bနဲ့Pop သီခငျြးတှကေို မွူးမွူးကွှကွှသီဆိုလရှေိ့တဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး လကျတလောမှာဆိုရငျ သူ့ရဲ့ ထှကျရှိသမြှသီခငျြးတှဟော အခဈြအလှမျး သီခငျြးအေးလေးတှဖွေဈပမေယျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေးမှုကိုရရှိထားပါသေးတယျ။ သီခငျြးတှရေဲ့ MTV တှကေိုလညျး အမွငျဆနျးစမေယျ့ ပုံစံအသဈအဆနျးတှနေဲ့ရိုကျကူးလရှေိ့ကာ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုအခိုငျအမာ ရရှိထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ အဆိုတျောအားတီတဈယောကျ ရိုကျကူးသှားဖို့ရှိတဲ့ BL ဇာတျရုပျအတှကျ လိုအပျနတေဲ့ မငျးသားက “BL ဇာတျရုပျအတှကျ မငျးသှေးခနျ့ နဲ့တှဲဖို့ ဘယျသူ့ကိုထညျ့ရိုကျရငျကောငျးမလဲ ? Any suggestion” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှ ပရိသတျတှကေိုအကွံပွုခကျြတောငျးထားပါတယျ။ အဆိုတျောအားတီရဲ့ အမာခံပရိသတျတှကေတော့ အသီးသီးအကွံပွုကွသလို အားတီရဲ့ ရိုကျကူးသှားမယျ့ BL ဇာတျလမျးဟာ ဘယျလိုသီခငျြးအမြိုးအစား ဖွဈမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစှာ စောငျ့မြှျောနကွေပွီလညျးဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျောအားတီရဲ့ လှငျပွငျ ဆိုတဲ့ အခဈြသီခငျြးလေးကိုလညျး BL ဇာတျလမျးလေးနဲ့ ရှုခငျးလှလှလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့အသညျးကိုဖမျးစားခဲ့ဖူးပါသေးတယျ။
CeleGabar ပရိသတျကွီးရေ သီခငျြးMTV တှကေို အမွငျဆနျးစမေယျ့ ပုံစံအသဈအဆနျးတှနေဲ့ ရိုကျကူးလရှေိ့တဲ့ နိုငျငံကြျောအဆိုတျောအားတီကတော့ ရိုကျကူးသှားဖို့ရှိတဲ့ BL ဇာတျရုပျအတှကျ ပြိုမတှေအေခဈြတျော မျောဒယျမငျးသားခြော မငျးသှေးခနျ့ နဲ့တှဲဖကျဖို့ ဘယျမငျးသားခြောကို ထညျ့ရိုကျကူးရငျကောငျးမလဲလို့ ပရိသတျတှကေို အကွံပွုခကျြတောငျးထားပါတယျ။ပရိသတျကွီးကရော ဘယျမငျးသားနဲ့တှဲရိုကျစခေငျြလဲ။
“BL ဇာတ်ရုပ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ မင်းသားကို ပရိသတ်တွေကိုအကြံပြုချက်တောင်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် အားတီ”
အဆိုတော်အားတီကတော့ R&Bနဲ့Pop သီချင်းတွေကို မြူးမြူးကြွကြွသီဆိုလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်တလောမှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ ထွက်ရှိသမျှသီချင်းတွေဟာ အချစ်အလွမ်း သီချင်းအေးလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိထားပါသေးတယ်။ သီချင်းတွေရဲ့ MTV တွေကိုလည်း အမြင်ဆန်းစေမယ့် ပုံစံအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ရိုက်ကူးလေ့ရှိကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုအခိုင်အမာ ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အဆိုတော်အားတီတစ်ယောက် ရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိတဲ့ BL ဇာတ်ရုပ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ မင်းသားက “BL ဇာတ်ရုပ်အတွက် မင်းသွေးခန့် နဲ့တွဲဖို့ ဘယ်သူ့ကိုထည့်ရိုက်ရင်ကောင်းမလဲ ? Any suggestion” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှ ပရိသတ်တွေကိုအကြံပြုချက်တောင်းထားပါတယ်။ အဆိုတော်အားတီရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ အသီးသီးအကြံပြုကြသလို အားတီရဲ့ ရိုက်ကူးသွားမယ့် BL ဇာတ်လမ်းဟာ ဘယ်လိုသီချင်းအမျိုးအစား ဖြစ်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်နေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်အားတီရဲ့ လွင်ပြင် ဆိုတဲ့ အချစ်သီချင်းလေးကိုလည်း BL ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ရှုခင်းလှလှလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကိုဖမ်းစားခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ သီချင်းMTV တွေကို အမြင်ဆန်းစေမယ့် ပုံစံအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ရိုက်ကူးလေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်အားတီကတော့ ရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိတဲ့ BL ဇာတ်ရုပ်အတွက် ပျိုမေတွေအချစ်တော် မော်ဒယ်မင်းသားချော မင်းသွေးခန့် နဲ့တွဲဖက်ဖို့ ဘယ်မင်းသားချောကို ထည့်ရိုက်ကူးရင်ကောင်းမလဲလို့ ပရိသတ်တွေကို အကြံပြုချက်တောင်းထားပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်မင်းသားနဲ့တွဲရိုက်စေချင်လဲ။
“ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့မှေးနပှေဲ့လေးကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ပြျောရှငျဖှယျကောငျးအောငျကငျြးပပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ”
” ဒေါ်ခင်ကြည် ကာရိုက်တာအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် (၂၅)ပေါင်တိတိ ချပစ်ရမည့် ဇာခြည်လင်း “